50 Kunyora Zvikanganiso izvo zvinoramba zvichitambudza maBloggi | Martech Zone
50 Kunyora Zvikanganiso zvinoramba zvichitambudza maBloggi
China, Gumiguru 1, 2009 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Pane dzimwe nguva muhupenyu hwangu uye pandakanga ndichienda kukoreji ini ndaibvunza kugona kwangu kunyora. Nekutenda, blogging yakauya uye (most) vaverengi vakadzora yavo yekuverenga mwero. Vaverengi vari kuongorora nekutenda kupfuura zvikanganiso nekurembera kutora chikamu, kupatsanura zvishoma, zvirevo, zviito zvekushandura, zvirevo, zvirevo zvinoenderana, uye zvakapusa zvinyoronyoro zviperengo.
Yakanga isiri yechokwadi munguva yakapfuura, asi isu tese tiri vanyori vane hunyanzvi izvozvi. Hapana zuva rinopfuura iro vatengesi vanofanirwa kunyora mablog mablog, zvinoburitswa, whitepapers, kesi zvidzidzo uye email! Iwe unobhadharwa kunyora… urikuita izvi zvakajairika zvikanganiso?
Yakarembera Inotora chikamu - kuitika kana iwe ukanyora chirevo uye chirevo mumutsara zvine chekuita nechimwe icho chisina kuitirwa.
Nzvimbo - ndiwo mazwi anodudzwa zvakafanana, akapereterwa zvakasiyana, uye ane zvirevo zvakasiyana. Iyi ingangove iko kwakajairika kunyora kukanganisa kwandinoita.
Kupatsanura Infinitives - zvinoitika apo chirevo chinoiswa pakati pezvisingagumi zvechiito (kureva noushingi enda.
Shanduko Verbs - chiito chinoda chidzidzo nechinhu.
Prepositions - batanidza mazita, zvirevo nemitsara kune mamwe mazwi muchirevo.
Zvidimbu Zvehukama - Zvidimikira zvine hukama ndezvi uyo, uyo, ani, ani, kupi, kupi, nguva, uye nei. Izvo zvinoshandiswa kujoina zvikamu kuti zviite mutsara wakaoma.
Kunyora - kuperetera, chero ani?
Ini ndoda kunatsiridza kunyora kwangu pese pandinogara pabhobhoyo. Ini ndoda kudzidza aya nuances eChirungu. Ndine chokwadi chekuti ini ndinokanganisa mune yega yega posvo… pamwe zvakatowanda. Ndingafarire kana iwe ukandichengeta ndakatendeseka uye uchisiya chirevo kuti ndisazvinyadzisa kazhinji. 🙂
Pasina imwezve ado, heano epamusoro makumi mashanu ekunyora zvikanganiso (kusabatanidza nyora) zvandave nemhosva nazvo kana zvandakaziva kuburikidza nedzimwe nzvimbo. 5 Zvikanganiso zveGirama zvinoita kuti Iwe Utarisike kunge mbeveve naBrian Clark inoramba ichindikurudzira!
50 Zvakajairika Kunyora Zvikanganiso
Ad kana kuwedzera
Yakashata kana Inopesana
Zano kana rairo
Kubata kana Kuita
Alot kana Zvakawanda
Kusazvibata kana Kusazvibata
Chikamu kana Kuparadzaniswa
Vimbisa kana Inishuwarenzi kana Inishuwarenzi
Kufungidzira kana Kufungidzira
Nguva kana A chinguva
Centrifugal kana Centripetal
Taura kana Saiti kana Kuona
Collocated kana Colocated
Kuzadzisa kana Kurumbidza
Ita kana kunyora
Hana kana Kuziva
Kanzuru kana Zano
Anotsamira kana Anotsamira
Desert kana Dessert
Kusafarira kana Kusafarira
Zvese kana zvisiri izvo
Emberass kana Kunyadzisa
Entomology kana Etymology
Bvunza kana Bvunza
Onai kana Inishuwarenzi
Mazuva ese kana Mazuva ese
Kure kana Kupfuurira
Kuzvikudza kana Flout
Inzwa vs Pano
Zviri kana Its
Ziva kana Izvozvi
Rara kana Kunyepa
Lets kana Handei
Kusununguka kana Kurasikirwa
Kurasikirwa kana Kusununguka
Deredza kana Kudzikisa
Kubhadharwa kana Kubhadharwa
Dzidzira kana Dzidzira
Musimboti kana Principal
Zvisinei kana Kuzeya
Stationery kana Chiteshi
Kupfuura kana Ipapo
Ivo, Ivo kana Iriko
Zvingaite zve, Zvingaite zve, Zvingaite kana Zvingave, Zvichifanira? Ve, Zvingaita?
Kupi kana Kwaive kana Tiri?
Ndeipi kana Iyo
Ndiani kana Ndiani
Wako kana Iwe?
Iwe kana ini kana ini
Kana iwe uchida kuverenga zvimwe, ini ndakawana imwe yeakanyanya rondedzero yezvikanganiso zvekunyora pawebhusaiti yaPaul Brians.
Ini ndinogona kana kutora karenda rezuva nezuva: 2010 Zvakajairika Zvikanganiso muChirungu Kushandisa Mazuva ese Bhokisi Karenda. Izvi zvava paruzivo rwangu!
Ndiri kutarisira kuverenga makomendi. Ini ndakakanganisa mune ino posvo, futi?
Tags: grammarzvikanganiso zvegramakunyora zvikanganiso
Unoda Kushanda Naani?
Gumiguru 1, 2009 pa 10:41 AM
Chirevo chezvinyorwa ndizvo zvakajairwa mvura yevanyori vazhinji. Kunyangwe vatauri vechirungu vechirungu vane mhosva yekuita izvi.
Gumiguru 1, 2009 na4: 04 PM
Ndatenda ColonelJeff! Mutauro wakaomarara zvakadii kana ivo vakanyanya kudzidza kune vamwe vanhu vasingakwanise kuzvigona? Uye isu tinotarisira kuti vese vanobva kune dzimwe nyika vauye kuzoidzidza… pamwe zvatinotarisira zvakati kurei!
Ndatenda ColonelJeff! Mutauro wakaomarara zvakadii kana ivo vakanyanya kudzidza kune vamwe vanhu vasingakwanise kuzvigona? Uye isu tinotarisira kuti mutorwa wese auye azvidzidze? Zvichida zvatinotarisira zvakati kurei!
Gumiguru 1, 2009 na12: 22 PM
Wagona kutaura. Handikwanise kutaura kuti handina mhosva zvachose kana zvasvika pakunyora zvisizvo. Kune mazuva andinoenda pane riff uye ndisingatombofunga kufunga spellcheck! Kwete kutaura kuti inokwezva, asi ini handina basa nezviperengo zvikanganiso izvozvi uye zvakare mumablog mablog. Zvinotaridza kuti tiri vanhu, uye ini chokwadi handina mupepeti wekuverenga zvese zvandaburitsa kunze uko: 0)
Gumiguru 1, 2009 na7: 17 PM
Doug, wangu wechitatu grade mudzidzisi akandidzidzisa kurangarira kuti kana ndichifunga nezvegwenga kana dhizeti kuyeuka kuti dhizeti ine maviri etsamba "s" b / c yummy inobata yakapetwa kaviri seye jecha rinodikitira. Usati hauna kumbodzidza chero chinhu kubva kwandiri! 😉
Gumiguru 2, 2009 na2: 07 PM
Kutenda nerunyorwa urwu, DK. http://bit.ly/LvNMv Ini kazhinji handinongedze zvekunyora zvikanganiso zvandinoona, kunze kwekunge ndaziva munhu wacho kare. Kurwira 2 kudzikisira zvikanganiso mublog rangu. 🙂 bit.ly/AbLe8
Gumiguru 5, 2009 pa 12:42 AM
Kutenda nekutumira. Ini, nemasikirwo, ndinonyanya kusarudza nezvegirama uye chiperengo (asi, semunhu, ini ndinokanganisawo). Naizvozvo, ndinofara kuona urwu runyorwa. Ndisati ndataura zvimwe zvekuwedzera pane izvo zvinyorwa, ndinoda "kukuchengeta iwe wakatendeseka" sekukumbira kwako.
1) Mundima yechipiri, ndinotenda waireva kuti "Hapana zuva rinopfuura nevashambadzi ivavo musaiti ndinofanira kunyora "asi ndinogona kunge ndisina kuverenga mushe mushe.
2) Iwe wakarasikirwa nepabhereti rekuvhara mune "Split infinitives" chinyorwa chinhu (zvakare, nehunyanzvi chidimbu "kureva" chinofanirwa kupatsanurwa nenguva).
Zvino, kuwedzera zvimwe zvishoma zvimwe zvinhu zvandinoona nguva dzose:
1) Yakatengwa ikaunzwa - Vanhu vazhinji vanoita sevanofunga kuti nguva yapfuura ye "kutenga" "yakaunzwa" uye zvinondipengesa pandinozviona.
2) Zvakare, kune uye maviri (haugone kutenda izvo zvasara pane yako runyorwa).
3) Kusabvumirana kwakawanda / kweumwe - ini ndinogara ndine mhosva neizvi pachangu, asi kukanganisa kukuru kunowanzoitwa nevanhu neichi kushandiswa kwe "ivo," "ivo" kana "avo" kana vachitaura nezvechimwechete chidzidzo. "Ivo" "ivo" uye "avo" ese ari muuzhinji, saka vanofanirwa kureva mazita ezhinji.
4) "Ini ndaigona kutarisira zvishoma" pachinzvimbo chekuti "Ini ndaisagona hanya zvishoma."
5) Kuwedzera panhamba yako 41, handikwanise kumira pandinoona vanhu vachinyora izwi rekuti "irregardless" (sekunge riri izwi chairo).
Zvakare, ini ndaingoda kuti zvizivikanwe (sekunge pane chero munhu ane hanya) kuti zvinondityaira zvachose batty pandinoona vanhu vachipedzisa mitsara nezviratidzo. Izvo hazvindinetse ini zvakanyanya sekuteerera kumashoko akataurwa, asi ini handikwanise kumira kuti ndione pakanyorwa.
Gumiguru 6, 2009 na12: 18 PM
Ndatenda nekutarisa uku. Wese blogger anofanirwa kuverenga asati atumira.
Handizive kuti sei, asi zvinoita sekugara zviri nyore kucherechedza zvikanganiso mune zvakatumirwa nevamwe vanhu…
Gumiguru 8, 2009 na3: 49 PM
Zvikanganiso zvakajairika zvinoitwa nevanyori, kwandiri maHomonyms uye zviperengo zvikanganiso.Handina kutarisa bhuku iro 2010 Zvakajairika Zvikanganiso muChirungu Kushandisa Mazuva ese Bhokisi reKarenda asi ndine chokwadi kuti rinofanira kunge riine zvakakosha asi zvakapusa zvinoitwa nemunyori.
Gumiguru 11, 2009 na9: 43 PM
Nenzira, nhamba 25 iseteti yenhamba 8.
Kunyangwe ini ndisiri mutauri wechiRungu chizvarwa ini ndinowanzoona akati wandei eaya uye ndinovawana achivhiringidza, kunyanya kana akagadzirwa nevanhu vekuChirungu vatauri.
Gumiguru 16, 2009 na6: 14 PM
wanga uchiziva here kuti # 8 ne # 26 zvakafanana? saka, nehunyanzvi, pane chete makumi mana nemapfumbamwe mune urwu runyorwa ;-)
Gumiguru 16, 2009 na6: 21 PM
Ndinogona here kukurudzira kufarira kwako kutora peek kubva kumusoro?
Gumiguru 16, 2009 na6: 26 PM
Peep yangu yekuvaraidza ndiyo inogara ichishandiswa zvisirizvo zvekuunza nekutora. Iwo akasiyana akasiyana pfungwa. Vazhinji vanhu havashandise zvisirizvo "uya" uye "enda" uye hutungamiriri hwakafanana mu "kuunza" uye "kutora".
Gumiguru 16, 2009 na9: 59 PM
Runyorwa runotyisa… zvakaitwa zvakanaka. Asi sezvo iwe uchidoma saiti yaPaul Brians (ona zvandakaita ipapo?), Iwe unofanirwa kuziva kuti kupatsanura infinitives haisi iko iko kukanganisa - ivo vanongova chinhu icho vanhu vakakwana vanotenda zvine simba kuti chikanganiso (ndinopomera Chirungu vadzidzisi) kuti iwe ugogonawo kuvadzivirira kuti vadzivise kuita gakava rese nguva dzese.
Rudzi irworwo rwunonditsamwisa nekuti rwunovira kuti tirege tichishungurudzwa nevanhu vakadzidza mutemo wenhema, asi chii chaungaite. Zvisinei, zvitsvage kumusoro - urikungopfuudzira ngano nekutaura kuti kupatsanura infinitives kutyora mutemo.
Mbudzi 5, 2009 na6: 18 PM
Saka ndinofara kuwana vanhu vazhinji vanofunga kuti girama ichiri nebasa. f Ndinoyeuka purofesa wangu wechiLatin nemazvo, pfungwa yekuparadzanisa infinitives inotangira kuchikoro chekufunga icho chinokoshesa zvinhu zvese Latinate. MuLatin, iwe haupatsanure ako infinitives, saka chokwadika iwe haufanire kuvaparadzanisa muChirungu! lol
Pane inoenderana tangent, inonongedza chimwe chinhu (ini handina chokwadi kuti chii) icho zvikoro muUS nemunyika dzeCommonwealth dzinoomerera kuti vanyoreri vanobva kunze kwedenderedzwa remukati vanyore TOEFL. Ini ndadzidzisa kugadzirisa chirungu girama uye kuumbika kuyunivhesiti kwegore rekutanga nerechipiri vadzidzi, vese avo vakarererwa muno muCanada, kwandinogara. Dai vadzidzi ivavo vaizonyora TOEFL, ndaifungidzira kuti taizomanikidzwa kuronga kuti ndiani anobva kupi.
Mbudzi 5, 2009 na7: 33 PM
Ramba uchiverenga, @ scubagirl15… Ndine chokwadi kuti uchave nezvakawanda zvidzidzo kwandiri. Don't Uye usazeze kundiruramisa, ini ndingafarire kunzwa mbeveve kuverenga chirevo pane kutaridzika mbeveve nevamwe zviuru zvishanu ndichiona kukanganisa kwangu online!
Jun 5, 2015 pa6: 21AM
Merci kudurura chinyorwa chinyorwa!
Un bon cheki-up !! Chaque bloggueurs et nombreux ils sont devraient se lire avant de poster leurs zvinyorwa.